မွဲဘၪနီၫနၥံၪအၪ့ဎၬ ယၧၩလဲၪ | Radio Veritas Asia
ထီးဘိၪ့လ့ၩဖၬအ့ၪဘၪနီၪ အမိအဖါလ့ၩဝ့ၫလၧယ 42ရုစလံၫ့ကိၭနံၪ့ဒ့ၭ၂မိ ၂၃:ၥ၅, ၅မိ ၥ၆:ၥလီၫ.- ဆၧမၩအၥၭလၧအအီၪလ ဆံၫနံၫနံၪ့နီၪ ဘဲၫဆၧဘိၪ့အထူၫအရူၫအၥိၭနီၪ အဝ့ၫ 43ၥံၪလ့ၩထၪ့ဝ့ၫလၧယရုစလံၫ့,- အမုနံၩလဖၪဎွ့ၩထၪ့ ဝ့ၫတၭ, ၦလဖၪနီၪထဲၩ့ထဲၩ့ဝ့ၫ, ဖိၪၥၪယ့ၫၡုၬအီၪထး ဝ့ၫလၧယရုစလံၫ့အဖၧၩ့နီၪတၭး အမိအဖါၥ့ၪယၫဝ့ၫ 44အ့ၬ.- အဝ့ၫၥံၪဆီၫ့မီၪ့ဝ့ၫလၧအအီၪလၧၦဂဲၫထဲၩ့လၧ အၥိၭအကျၩတၭ, ထဲၩ့ထဲၩ့ဝ့ၫလနံၩဖၧၩ့ၥၭတၭ, အၪ့ ဎၬဝ့ၫလၩ့ထံးလၩ့ဆ့ၭ လၧအဘူၭအထံးဒဲလၧအထံၩ 45အၥိၭအကျၩ,- လဒၪဘၪဝ့ၫတၭ, ထဲၩ့ထဲၩ့အၪ့ဎၬဝ့ၫ လၧယရုစလံၫ့လီၫ.
46ဆၧမၩအၥၭလၧၥၧၫ့နံၩဖီၩ့ခွံၬတၭ, မွဲအဒၪထဲၩ့ဝ့ၫ အီၪလၧဆၧလုအဂံၪ့ဖၧၩ့ ဆၧၫ့နၩ့ဝ့ၫလၧ ဆရၫၥံၪအ ကျၩတၭ, ခိၭနၪအဝ့ၫၥံၪအလူနီၪ ဒဲအၪ့စၪ့ဆၧလီၫ. 47လၧအဆၧကိၪ့ၥ့ၪ, ဒဲအစံၭဆၧၫ့ဆၧအကၠီၩ့တၭ, ၦနါ ဂၧၫ့ဝ့ၫလဖၪနီၪ ထီၫမံၫထီၫမၪဝ့ၫလု ၄:၂၂-၃၂, အၪ့ ၥၥ၉:၉၉, မၭ ၇:၂၈, မၫ ၥ:၂၂, ယီ ၇:ၥ၅-၄၆ထီးအလူၬလီၫ.
48ထီးအဝ့ၫၥံၪဒၪဘၪဝ့ၫနီၪ,ထီၫမံၫထီၫမၪဝ့ၫတၭ, အ မိစံၭအဝ့ၫ,ဖိၪဧ့မွဲဘၪနီၫနမၩပၧၩဘဲၫယီၩလဲၪ. ယိခွါ, နဖါဒဲယၧၩယီၩ, ပၥုၪ့အုၭပၥၭအုၭတၭ, ပအၪ့ဎၬယူၭ 49နၧၩယူၭ.- အဝ့ၫဒၪစံၭဆၧၫ့ဝ့ၫ, မွဲဘၪနီၫနၥံၪအၪ့ဎၬ ယၧၩလဲၪ.ယဘၪအီၪလၧယဖါအဂံၪ့ဖၧၩ့ယီ ၅:ၥ၇ ဒဲ ၉:၄မွဲနၥံၪ 50ၥ့ၪယၫအ့ၬဧၪ.- ဆၧချဲၩ့လၧအလီၩဘၪဝ့ၫနီၪ,အဝ့ၫၥံၪ 51နၪဝ့ၫၥ့ၪအ့ၬ.- အဝ့ၫဒၪထဲၩ့ထဲၩ့ဝ့ၫလၧအဝ့ၫၥံၪအၥိၭ လၧနၭဇရ့ၭတၭ, အီၪက့ၪအၥၭလၧအဝ့ၫၥံၪအဖၫ့လၬ လီၫ.ဆၧလဖၪနီၪ အမိထီးန့ဝ့ၫ လၧအၥၭဖၧၩ့အဆၧၫ့ဖိၪ ၥ၉, ဒၫ့ ၇:၂၈ထီး 52အလူၬလီၫ.- ယ့ၫၡုၬဒိၪထၪ့ဝ့ၫအဆၧၫ့ဖိၪ ၄ဝ, ၥစၫ ၂:၂၆တၭအဆၧကိၪ့ၥ့ၪ, ဒဲအခိးအတၩလၧယွၩအမ့ၬ ယၫဒဲလၧၦၡၩအမ့ၬယၫ အၪထၪ့ဝ့ၫဒၪဆ့လီၫ.
ဘိၪ့လ့ၩဖၭအဆၧၫ့အထီ မုအီၪပွံၭနံၩႇ မုနွ့ၫ(၄)
ဘိၪ့လ့ၩဖၭအဆၧၫ့အထီ မုအီၪပွံၭနံၩႇ မုနွ့ၫ(၃)